Splọ akụ dị ala na-agbasa Forex - the Forex Forex Trading Spreads Brokers
A na-agbasa na Forex
Home / Banyere / Ihe kpatara FXCC / agbasa
Otu ụzọ dị mfe anyị nwere ike isi mee ihe, iji malite ịghọta echiche nke gbasara na-agbasa n'ahịa mbụ, bụ ịtụle oge mgbe anyị gbanwere ego ego anyị na desktọọpụ. Anyị niile maara na anyị na-agbanwe ego ụlọ anyị maka ego ezumike; pound na euro, dollar na euro, euro iji yen. Na windo na desktọọpụ, ma ọ bụ na kọmputa ya, anyị ga-ahụ ọnụ ahịa abụọ dị iche iche, ụlọ ọrụ ahụ na-ekwupụta n'ụzọ dị mma; "Anyị na-azụ ego a, anyị na-erekwa ego a." Nkọwa ngwugwu na-egosi na e nwere ọdịiche na ụkpụrụ na ahịa dị n'ebe ahụ; mgbasa ozi, ma ọ bụ ọrụ ahụ. Nke a bụ ma eleghị anya ihe kachasị mfe nke gbasara mgbasa ozi nke anyị na-ahụ na ndụ anyị kwa ụbọchị.
Nkọwa di mfe nke "gbasaa" bu ihe di iche n'etiti ahia na ire ere nke nche. A pụkwara ile ya anya dị ka otu n'ime ihe ndị na-efu ahia mgbe ị na-azụ ahịa. A pụrụ ịkọsaa na mgbasa ozi ndị dị na ya dịka ọdịiche dị n'etiti ụdị azụ ahịa na ịzụ ahịa dị iche iche na-enye maka ụdị ego ọ bụla. Tupu ahia ọ bụla na-aghọrịrị uru, ndị na-ere ahịa ahịa aghaghị ibu ụzọ kọọ maka ọnụahịa nke mgbasa ahụ, nke onye na-ere ahịa na-eji nwayọọ nwayọọ depụta ya. Mgbasawanye ala na-eme ka o doo anya na ndị ahịa na-aga nke ọma ga-abanye n'ókèala mbụ.
Na ahịa ndị ahịa ndị ahịa na-agbanwe otu ego maka onye ọzọ, na-ere otu ego na ibe. Ndị ahịa na-eji ego ụfọdụ ewepụta ego na ego ọzọ, na-ekwu na ọ ga-ada ma ọ bụ ebili. Ya mere, a na-ekwu ego maka ọnụahịa ha na ego ọzọ.
Iji kọwaa ozi a n'ụzọ dị mfe, a na-ekwu ego ugboro abụọ, dịka ọmụmaatụ EUR / USD. A na-akpọ ego mbụ ahụ ego ego na ego nke abụọ a na-akpọ counter, ma ọ bụ na-ekwu ego (isi / quote). Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na o were $ 1.07500 ịzụta € 1, okwu EUR / USD ga-ahazi 1.075 / 1. EUR (euro) ga-abụ ego isi ego na USD (dollar) ga-abụ ọnụego, ma ọ bụ ego ego.
Ya mere, nke ahụ bụ ụzọ ziri ezi, nke zuru ụwa ọnụ, usoro iji jiri ego na-ekwu ego n'ahịa, ugbu a ka anyị lelee otú e si gbasaa mgbasa ahụ. A na - enye ọnụahịa Forex na "rịọ ma jụọ" ahịa, ma ọ bụ "ịzụta ma ree" nke a yiri ihe ọtụtụ ndị nwere ego ga-ama ma ọ bụrụ na ha zụrụ ma ọ bụ ree ahia; e nwere ọnụahịa dị iche iche iji ree òkè ma enwere ego dị iche iche ịzụta òkè. N'ozuzu obere mgbasa a bụ uru nke onye na-ere ahịa na azụmahịa, ma ọ bụ ọrụ ahụ.
Ọnụahịa ahụ bụ ọnụahịa nke onye na-ere ahia na-adị njikere ịzụta ego isi (euro na ihe nlereanya anyị) iji gbanwere dollar ego ahụ. N'aka nke ọzọ, ọnụahịa rịọrọ bụ ọnụahịa nke onye na-ere ahia na-adị njikere ire ego ego maka mgbanwe ego. A na-ekwukarị ọnụahịa Forex iji nọmba ise. Ya mere, dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na anyị nwere ọnụahịa USD / USD nke ọnụahịa 1.07321 wee jụọ ego nke 1.07335, mgbasa ahụ ga-abụ 1.4.
Ntọala na-agbasa na ọnụahịa ahịa ahịa
Ugbu a, anyị akọwaala ihe mgbasa ozi na otú e si agụta ha, ọ dị mkpa iji mesie ike dị iche n'etiti onye na-ere ahịa ahịa nke ọma na mgbasa ozi gbasara mgbasa ozi, na otu onye na-arụ ọrụ ECN - STP (dịka FXCC) na-arụ ọrụ, na-enye ohere ezi ahịa na-agbasa. Na otu onye na-ere ahịa na-arụ ọrụ ECN - STP bụ nhọrọ ziri ezi (ikekwe nhọrọ naanị) maka ndị ahịa na-ewere onwe ha ndị ọkachamara.
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa azụmaahịa n'oge ochie ga-akpọsara ha ihe ha na-ekwu na ha "dị ala, gbasie ike, gbasaa mgbasa," dị ka ihe bara uru ịkwado ndị ahịa. Otú ọ dị, ihe bụ eziokwu bụ na mgbasa ozi gbasapụrụ enweghị ike inye nnukwu uru ma n'ọtụtụ ọnọdụ nwere ike ịduhie, nyere ndị na-ere ahịa (na nkọwa) ha na-ere ahịa ha na ahịa n'ime mpaghara iji nweta uru ha.
Ndị na-ere ahịa nwere ike iji usoro dịka ịgbasa mgbasa; a tactic nke ndị na-ere ahịa na ndị na-arụ ọrụ gbanwee mgbasa ahụ na-enye ndị ahịa ha mgbe ahịa ndị ahịa na-aga megide onye na-ere ahịa. Onye ahia ahụ nwere ike itinye ahia ahụ n'ihe ha chere na ọ bụ otu mgbasa ozi nke ọ bụla, nke ọ bụla, na mgbasa ahụ nwere ike ịbụ pips atọ site na ezigbo ọnụ ahịa ahịa, ya mere, akwụ ụgwọ a na-akwụ bụ (n'ezie) anọ pips. N'iji nke a tụnyere ihe ECN n'usoro usoro nhazi, ebe iwu ndị ahịa ahụ jikọtara ya site na ndị na-ahụ maka ECN, ọ ga-apụta ìhè ọ dị mkpa maka ndị ahịa azụ ahịa, ndị chọrọ ka a gụọ ndị ọkachamara, ka ha tinye ahịa site na gburugburu ECN.
Ụkpụrụ ahịa azụmaahịa FXCC nke ECN / STP anaghị egosiputa na-agbasa, ihe nlereanya ahụ na-enye ịrịọ rịọ-rịọ nchịkọta nke mmiri ọdọ mmiri na-agwakọta; buru ibu na-eduga na fx liquidity na-enye. Ya mere, mgbasa ozi a na-enye na-egosipụta ezi ego ịzụ na ire ere mgbe niile maka otu ụzọ ego, na-achọpụta na ndị na-etinye ego trading Forex n'okpuru ezigbo ahịa ahịa nke ezigbo onyinye na ịchọta kwa afọ.
Mgbasa a gbasaa nwere ike iyi ka ihe dị mma mgbe ọnọdụ ahịa dị ezigbo mma ma enwee nnukwu ego na ọchịchọ. Nke bụ eziokwu bụ na mgbasa ozi gbasaa na-anọgide na ebe ọbụlagodi mgbe ọnọdụ ahịa abụghị nke kachasị mma na n'agbanyeghị ezigbo azụ ahịa na ire ere maka ihe ọ bụla e nyere ego ụzọ bụ.
Ihe nlereanya ECN / STP anyị na-enye ndị ahịa anyị ohere ịnweta ndị ahịa na Forex ọzọ (ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ). Anyị adịghị asọmpi ndị ahịa anyị, ma ọ bụ ọbụna ahia megide ha. Nke a na-enye ndị ahịa anyị uru karịa ndị na-ere ahịa n'ahịa:
Ụdị ọnụ ọgụgụ kachasị elu
Enweghị esemokwu n'etiti FXCC na ndị ahịa ya
Enweghị ike na Scalping
Enweghị "ịchụ nta"
FXCC na-agba mbọ inye ndị ahịa ya ọnụego kacha asọmpi ma gbasaa n'ahịa. Nke a bụ ihe mere anyị ji tinye aka n'ịmekọrịta mmekọrịta na ndị na-enye ego. Ihe ndị ahịa anyị nwere uru bụ na ha na-abanye n'egwuregwu forex na otu okwu dịka ụlọ ọrụ ego kachasị elu.
A na-enweta ego site n'aka ndị na-enye ego na FXCC nke Aggregation Engine nke na-ahọpụta ndị kasị mma BID na rịọ ụgwọ site na streamed ahịa na posts na họrọ kacha mma BID / BỤ ọnụ ahịa na ndị ahịa anyị, dị ka e gosiri na diagram n'okpuru.